ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲ? - ဘုရားသခင်ကအဖြေပေးတဲ့ ဆုတောင်းချက်များကိုကြည့်ပါ - ဆုတောင်းခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ
သင် ဘယ်လိုဆုတောင်းသင့်သလဲ? ဆုတောင်းချက်တွေကို ဘုရားသခင် အဖြေပေးဖို့ ဘာလိုအပ်ပါသလဲ?
ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲ - အဖြေရတဲ့ဆုတောင်းချက်များ
ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကို သိဖူးပါသလား? ကျမ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ ဖြစ်တုန်းက မကြာခဏ ဆုတောင်းတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ဖြေရှင်းပေးဖို့ သူမ ယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အပတ်တိုင်း ပြောပြတတ်ပါတယ်။ အဲ- အပတ်တိုင်းပါပဲ၊ ဘုရားက အြ့ံသဖွယ်ရာ တစ်ခုခုလုပ်ပြီး သူမရဲ့ဆုတောင်းသံကို အဖြေပေးတယ်ဆိုတာ ကျမတွေ့ရတယ်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ်ယောက်အနေနဲ့ အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်း ဒီအခြင်းအရာကိုတွေ့နေရတာ ဘယ်လောက်ခက်မလဲ ဆိုတာစဉ်းစားမိပါသလား? နောက်ပိုင်းကျတော့ “တိုက်ဆိုင်မှုပါ” ဆိုတာကြီးက တကယ်ကို မခိုင်မာတဲ့ ငြင်းဆန်မှုလို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒါဆို ဘာကြောင့် ဘုရားက ကျမသူငယ်ချင်းရဲ့ဆုတောင်းသံတွေကို အဖြေပေးသလဲ? အကြီးမားဆုံးသော အကြောင်းရင်းကတော့ သူမမှာ ဘုရားနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိလို့ပါပဲ။ ဘုရားအလိုတော်ကို လိုက်လျှောက်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ သူပြောတာကို အမှန်တကယ် နားထောင်တယ်။ ဘုရားက သူမရဲ့အသက်တာမှာ ပဲ့ပြင်လမ်းပြ အုပ်စိုးခွင့်ရှိတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တယ်၊ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲ ကြိုဆိုလက်ခံ အခွင့်ပေးပါတယ်! သူမ ဘယ်အရာအတွက်မဆို ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ သူမရဲ့ ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သာမန်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုမျှပါပဲ။ သူမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ ပူပင်သောကတွေ၊ ပြီးတော့ ဘဝမှာ လတ်တလောဖြစ်ပျက်တဲ့ ဘယ်လို အရေးကိစ္စအတွက်မဆို ဘုရားဆီမှာ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြောပြအပ်နှံတတ်တယ်။ ဒါ့အပြင်၊ ကျမ်းစာထဲမှာ သူမ ဖတ်ရတဲ့အတိုင်း ဘုရားရှင်က သူ့အပေါ် အဲဒီလို ကိုးစားယုံကြည်ဖို့အလိုရှိတယ်လို့လည်း ခံယူထားတယ်။
“ငါတို့သည် ဘုရားသခင့်အထံတော်၌ ရဲရင့်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် အလိုတော်နှင့်အညီ တစုံတခု သောဆုကို တောင်းလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် နားထောင်တော်မူ၏။” ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာထဲကပြောပြချက်ကို သူမအသက်တာက တော်တော်လေး သက်သေပြပါတယ်။၁ “ထာဝရဘုရားသည် ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ သူတို့ အော်ဟစ်သံကိုလည်း နားထောင်တော်မူ၏။”၂
ဒါဆို ဘာကြောင့် ဘုရားက လူတိုင်းရဲ့ဆုတောင်းသံကို အဖြေမပေးတာလဲ?ံ
သူတို့ဟာ ဘုရားနဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာ သိကောင်းသိမယ်၊ ပြီးတော့ မကြာမကြာလည်း ဘုရားတောင်ဝတ်ပြုရင် ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဆုတောင်းချက်တွေအတွက် အဖြေ ရဖူးဟန်မတူတဲ့လူတွေက ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ချက်မရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်၊ ဘုရားဆီကနေ သူတို့အပြစ်အတွက် အပြည့်အဝ ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့အရာနဲ့ကော ဘာဆိုင်လို့လဲ? ရှင်းပြချက်တစ်ခုပေးပါမယ်။ “ကြည့်ရှုလော့၊ ထာဝရဘုရားသည် မကယ်မတင်နိုင်အောင် လက်တော်တိုသည် မဟုတ်။ မကြားနိုင်အောင် နားတော်ထိုင်းသည် မဟုတ်။ သင်တို့ဒုစရိုက်သည် သင်တို့ကို ဘုရားသခင်နှင့် ကွာစေပြီ။ ကြားတော်မမူစေခြင်းငှာ၊ သင်တို့အပြစ်သည် မျက်နှာတော်ကိုလွှဲစေပြီ။”၃
အဲဒီလို ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ လူတွေ ဘုရားဆီမှာ တစ်ခုခု တောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ ဘာဖြစ်တတ်လဲ? “ကိုယ်တော််၊ ဒီအခက်အခဲအတွက် ကိုယ်တော့်မစမှု တကယ် လိုအပ်နေပါတယ်။” ဆိုပြီး အစပြုပါတယ်။ အဲ- ဒါပေမယ့်၊ ခဏနားပြီးတော့ “ကျွန်တော််/ကျွန်မဟာ အပြစ်ကင်းတဲ့သူ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအရာအတွက် တောင်းလျှောက်ပိုင်ခွင့် အမှန်တကယ် မရှိဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။” ဆိုပြီး နောက်ကလိုက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်အပြစ်နဲ့ ကျရှုံးခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်လို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒါကို ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘုရားကလည်း သိတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ “(အဲဒီတော့) ဘာဖြစ်သေးလဲကွာ!” ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ် (မိမိရဲ့မလုံခြုံတဲ့စိတ်ခံစားမှုကနေ)။ သူတို့သိဟန်မတူတဲ့အချက်က- သူတို့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက် ဘုရားရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ။ ဘုရားက သူတို့ဆုတောင်းသံကို ကြားရအောင် ဘုရားနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ မသိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီသိခြင်းဟာ ဆုတောင်းခြင်းအဖြေတွေအတွက် အခြေခံအချက်ပါပဲ။
ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲ - အခြေခံအချက်
ဦးစွာ ဘုရားနဲ့ ကျွမ်းဝင်ဆက်သွယ်မှု အစပြုဖို့လိုပါတယ််။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာပြောပါမယ်။ ဥပမာ- ‘မိုက်’ဆိုတဲ့လူက ကားအကြွေးဝယ်ကိစ္စအတွက် ပရင်စတန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက္ခချုပ်ကြီးကို ထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုပါစို့။ မိုက်က ပါမောက္ခချုပ်ကြီးကို လူချင်းမသိဘူးဆိုရင် ကားအကြွေးဝယ်ဖို့ ကိစ္စ ဖြစ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့်၊ ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့သမီးက သူမအဖေကို လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုရင်လည်း ရတာပါပဲ။ ကျွမ်းဝင်မှုသာ အဓိကပါ။
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘုရားရဲ့သားသမီး အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ ဘုရားနဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင် ဘုရားကသူ့ကို သိပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဆုတောင်းသံတွေကို နားညောင်းပါတယ်။ ယေရှုက “ငါသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းဖြစ်၏။ ငါ၏သိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို့သည်လည်း ငါ့ကိုသိကြ၏။ ... ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကို နားထောင်၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်း နှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှ မနှုတ်မယူရာ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။၄
ဒါဆို ဘုရားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သင် ဘုရားကို အမှန်တကယ်သိပါသလား၊ ပြီးတော့ ဘုရားကကော သင့်ကို သိပါသလား? သင့်ဆုတောင်းသံတွေကို ဘုရားကအဖြေပေးဖို့ အာမခံနိုင်လောက်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုမျိုး သင့်မှာ ရှိပါရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် ဘုရားက တော်တော်ဝေးကွာနေလား၊ သင့်ဘဝမှာ ဘုရားဆိုတာ ထင်မြင်ခံယူချက် တစ်ခုလောက်ပဲလား? ဘုရားက အလှမ်းဝေးနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် သင် ဘုရားကိုသိရဲ့လားဆိုတာ မသေချာဘူးဆိုရင်၊ ယခုပင် ဘုရားနဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို အစပြုနိုင်မယ့်နည်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့- ချိတ်ဆက် လိုက်ခြင်းပါပဲ။
ဘုရားက သင့်ဆုတောင်းချက်ကို အသေအချာ အဖြေပေးမှာလား?
သူ့ကိုသိပြီး သူ့ကိုအမှီပြုတဲ့သူတွေအတွက် ယေရှုဘုရားက ကောင်းချီးပေးတဲ့အခါ ဗုန်းဗောလအော ရက်ရောမယ့်ဟန်ရှိပါတယ် - “သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည် သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည် တောင်းချင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်။”၅ ကိုယ်က သူ၌တည်ြပီးတော့ သူ့စကားတွေ ကိုယ်၌တည်ဖို့ ဆိုတာ- သူ့ကို အစဉ်စောင့်ကြည့်ရင်း၊ သူ့အပေါ် အမှီပြုရင်း၊ သူပြောတာကို နာခံရင်း မိမိအသက်တာကို လျှောက်လှမ်းဖို့ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်လိုချင်တာဘာမဆို တောင်းနိုင်ပါပြီ။ ဒါကို နောက်ထပ်အထူးပြုပေးမယ့်အရာက- “ငါတို့သည် ဘုရားသခင့်အထံတော်၌ ရဲရင့်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် အလိုတော်နှင့်အညီ တစုံတခုသောဆုကိုတောင်းလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် နားထောင်တော်မူ၏။ ဆုတောင်းသမျှသော စကားတို့ကို နားထောင်တော်မူသည်ကို ငါတို့သိလျှင်၊ အထံတော်၌ တောင်းသောဆုတို့ကိုရမည်ဟု သိရကြ၏။”၆ ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကို သူ့အလိုတော်အားဖြင့် (ပြီးတော့ သူ့ဉာဏ်တော်အားဖြင့်၊ သူ့မေတ္တာတော်အားဖြင့်၊ သူ့သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းအားဖြင့်စသည်) နားညောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုခုချွတ်ချော်သွားတဲ့အခါကျရင် ကျနော်တို့ ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိရတယ်လို့ ယူဆလက်ခံကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့ကိစ္စတွေက ကျနော်တို့ကို နားလည်စေလို့ပါပဲ! ကျနော်တို့က အတိအကျဆုတောင်း ထားတဲ့အရာတစ်ခုအတွက် မှန်ကန်တဲ့“အဖြေ”ဆိုတာ တစ်ခုပဲရှိရမယ်၊ အဲဒီအဖြေကသာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ပဲလို့ ယူဆတတ်ကြတယ်။ အဲဒါခက်တော့တာပဲ။ ကျနော်တို့လူသားတွေဟာ အချိန်ရဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ အသိတရားရဲ့အကန့်အသတ်အတွင်းမှာ အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဟာ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်အကြောင်း အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အချက်အလက်တွေသာသိပြီး၊ အဲဒီအခြေအနေအပေါ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ့်အရာအတွက် ညွှန်ပြချက်များကိုသာ သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့သိမြင်နားလည်ခြင်းကတော့ အကန့်အသတ်မဲ့ပါပဲ။ ဘဝဇာတ်ခုံပေါ်က(သို့)သမိုင်းဖြစ်စဉ်ထဲက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခု ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတာ သူသိမြင်တာချည်းပါပဲ။ ဒါပြီးတော့ သူက ကျနော်တို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့ ဟိုးအလွန်မှာထိ သူ့ အကြံအစည်များရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါ သူ့အကြံအစည်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ ကျနော်တို့ ကျိန်းသေတွက်ထားရုံနဲ့ ဘုရားသခင်က ဘာမှလုပ်လိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဆုတောင်းပြည့်ဖို့ ဘာလိုအပ်သလဲ? ဘုရားက ဘာလုပ်ပေးလိုသလဲ?
ကျနော်တို့အတွက် ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောရရင် စာမျက်နှာတွေ အများကြီး ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးဟာ ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ သူနဲ့အတူခံစားမယ့် ရင်းနှီးသိကျွမ်းမှုမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ကို ပေးအပ်ချင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ ဖော်ပြချက်ပါပဲ။ ဒီမှာ ဥပမာ အနည်းအကျဉ်း ပေးပါမယ််။
“သို့သော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့၌ ကျေးဇူးပြုလိုသောငှာ မြော်လင့်တော်မူမည်။ ကရုဏာပြုလိုသောငှာ ချီးမြှောက်ခြင်းကို ခံတော်မူမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် တရားသောဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကို မြော်လင့်သောသူအပေါင်းတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။”၇ နားလည်လိုက်ပါသလား? တစ်ဦးဦးက ထိုင်ရာကနေကို ထပြီး လာကူညီမယ့်သဘောလေ။ “ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအမှုသည် စုံလင်၏။... ခိုလှုံသောလူအပေါင်းတို့ အကွယ်အကာ ဖြစ်တော်မူ၏။”၈ “ကြောက်ရွံ့သောသူနှင့် ကရုဏာတော်ကို မြော်လင့်သောသူတို့ကို ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူ၏။”၉
ဒါပေမယ့် သင့်အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ ကတိတော်ဖော်ပြချက် အမြင့်မားဆုံးကတော့ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်- ယေရှုက “ကိုယ်အဆွေတို့အဖို့အလိုငှာ ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက် သာ၍မြတ်သော မေတ္တာသည် အဘယ်သူ၌မျှမရှိ။”၁၀ အဲဒါယေရှုပြုတော်မူခဲ့တဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ဘက်၌ ရှိတော်မူလျှင်၊ အဘယ်သူသည် ငါတို့တဘက်၌ နေနိုင်မည်နည်း? မိမိသားတော်ရင်းကို မနှမြောဘဲ ငါတို့ရှိသမျှအဘို့အလိုငှာ စွန့်တော်မူသောသူသည်၊ သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အားမပေးဘဲ အဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်း?”၁၁
လူတွေဖျားကြတာတော့ အသေအချာပဲ၊ သေတောင်သေကြတာပဲလေ။ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေ ကြုံရတာအမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ အရမ်းခက်ခဲကျပ်တည်းတဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဘုရားက ကျနော်တို့ရဲ့အပူအပင်တွေကို သူ့ဆီကိုအပ်နှံဖို့ ပြောပါတယ်။ အခြေအနေတွေက စိတ်ပျက်အားလျော့စရာကောင်းနေရင်တောင် “သင်တို့ကို သတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့၌ စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်တော်၌အပ်နှံကြလော့။”၁၂ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခြေအနေတွေက ထိန်းချုပ်မရတော့သလို ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း အဲလိုကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ တလောကလုံး ပျက်စီးတော့မလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပင် ဘုရားက ကျနော်တို့ကို လုံခြုံစေပါတယ်။ အဲဒီချိန်ဟာ ကျနော်တို့ ဘုရားကိုသိခဲ့တာ အရမ်းကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့အချိန်အခါမျိုးပါ။ “သခင်ဘုရားသည် အနီးအပါး၌ ရှိတော်မူ၏။ အဘယ်အမှုကိုမျှ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ အရာရာ၌ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွ ဆုတောင်းပဌနာ ပြုသောအားဖြင့်၊ သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကို ဘုရားသခင်အား ကြားလျှောက်ကြလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ကြံစည်၍မမှီနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သင်တို့၏ စိတ်နှလုံးတို့ကို စောင့်မလိမ့်မည်။”၁၃ သင် ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာထက် အများကြီးသာလွန်တဲ့ ပြဿနာဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းနည်းတွေ ဘုရား ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ခရစ်ယာန်မဆို သူတို့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်သာဓကတွေ ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး အခြေအနေတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်မသွားတောင် အဲဒီပြဿနာတွေအလယ်မှာ ကျနော်တို့အား သူရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ယေရှုက “ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါ ထားခဲ့၏။ ငါ၏ ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ လောကီသားတို့ ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။”၁၄ လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
အဲဒါဟာ ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ သူ့ကိုဆက်လက်ကိုးစားဖို့ -- ကျမ်းစာပြောသလို “မျက်မှောက်မမြင်ဘဲ ယုံကြည်မြော်လင့်ခြင်း ရှိသည်အတိုင်း ငါတို့သည် ကျင့်ဆောင်ပြုမူ”ဖို့ -- ပြောနေတဲ့အချိန် (အခြေအနေတွေ ခက်ခဲနေဆဲအချိန်) အခါမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက မျက်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတော်အပေါ်မှာပဲ အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတံတား*ပေါ် ဖြတ်မောင်းလာတဲ့ ကားတစ်စီးဟာ တံတားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားမောင်းတဲ့လူစိတ်ထဲမှာ ဘာပဲခံစားခံစား၊ စဉ်းစားစဉ်းစား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးကတယောက်ယောက်နဲ့ပဲ စကားပြောလို့ပဲဖြစ်စေ အဲဒါ အရေးမပါပါဘူး။ ကားကို တဖက်ကမ်းကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပို့ဆောင်ပေးတာက မောင်းတဲ့လူ ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့် တံတားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှု၊ စိတ်ချတည်မှီနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ ဘုရားက မိမိကိုယ်ကိုအစား သူရဲ့ စိတ်ချတည်မှီနိုင်ခြင်း၊ သူ့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတော် -- သူ့ရဲ့ ကရုဏာ၊ မေတ္တာ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း -- တွေကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ သူက “အကယ်စင်စစ် ထာဝရမေတ္တာနှင့် သင့်ကိုငါ ချစ်၏။ ထို့ကြောင့်၊ ကရုဏာကျေးဇူးကို သင်၌ ကြာမြင့်စွာပြ၏။”၁၅ လို့ ပြောပါတယ်။ “အို လူများတို့၊ ဘုရားသခင်၌ အစဉ်မပြတ် ခိုလှုံကြလော့။ ရှေ့တော်၌ စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်ပြကြလော့။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ ခိုလှုံရာ ဖြစ်တော်မူ၏။”၁၆
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ... ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲ
ဘုရားသခင်က သူ့သားသမီးတွေ (ဘုရားသခင်ကို ဘဝထဲမှာ လက်ခံပြီး၊ သူ့အလိုတော်ကိုရှာဖွေလိုက်လျှောက်သူများ ) ရဲ့ ဆုတောင်းသံတွေကို လက်ခံနားညောင်းပါတယ်။ သူ ကျနော်တို့ရဲ့ သောကများကို ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် သူ့အထံတော်ကို ယူဆောင်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ အလိုတော်အတိုင်း အဲဒီအပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ကျနော်တို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို သူ့အပေါ်မှာ ချထားပစ်ဖို့နဲ့ ပြဿနာတွေကိုအန်တုမယ့် ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုး သူ့ဆီက ရယူခံစားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အခြေခံအကြောင်းအရင်းကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ထူးခြားသောလက္ခဏာတော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ပိုမိုသိကျွမ်းလေ၊ သူ့ကို ပိုမိုကိုးစားတတ်လေပါပဲ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ထူးခြားသောလက္ခဏာတော်အကြောင်း ပိုမိုသိလိုတယ်ဆိုရင် “ဘုရားသခင် ဘယ်သူလဲ?” ဒါမှမဟုတ် ဒီဆိုဒ်ထဲက တခြားဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပါ။ ကျနော်တို့ ဆုတောင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဘုရားရဲ့ ထူးခြားသောလက္ခဏာတော်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် အဖြေပေးတဲ့ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးသော ဆုတောင်းချက်ကတော့ သူနဲ့ဆက်သွယ်မှု အစပြုဖို့ရာအတွက် တောင်းတဲ့ဆုပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရှင်ယောဟန်် ပ-စောင် ၅း၁၄ (၂) ရှင်ပေတရု ပ-စောင် ၃း၁၂ (၃) ဟေရှယ ၅၉း၁-၂ (၄) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁ဝး၁၄၊ ၂၇-၂၈ (၅) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၅းရ (၆) ရှင်ယောဟန် ပ-စောင် ၅း၁၄-၁၅ (၇) ဟေရှာယ ၃ဝး၁၈ (၈) ဆာလံ ၁၈း၃၀ (၉) ဆာလံ ၁၄ရး၁၁ (၁၀) ရှင်ယောဟန် ၁၅း၁၃ (၁၁) ရောမ ၈း၃၂ (၁၂) ရှင်ပေတရု ပ-စောင် ၅းရ (၁၃) ဖိလိပ္ပိ ၄း၅-၇ (၁၄) ရှင်ယောဟန် ၁၄း၂၇ (၁၅) ယေရမိ ၃၁း၃ (၁၆) ဆာလံ ၆၂း၈
* ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏မှတ်ချက်- the Golden Gate Bridge ကို မြန်မာဒေသံအရ “စစ်ကိုင်းတံတား”ဟု အမည်ပြောင်းထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။